Ururka Caafimaadka Adduunka WHO oo sheegtay in dunida uu kadilaacay nooc cusub oo xanuunka COVID-19 ah | Dayniile.com
Home Warkii Ururka Caafimaadka Adduunka WHO oo sheegtay in dunida uu kadilaacay nooc cusub...
Ururka Caafimaadka Adduunka WHO oo sheegtay in dunida uu kadilaacay nooc cusub oo xanuunka COVID-19 ah
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa ku dhawaaqay in uu soo baxay nooc cusub oo kamid ah coronavirus ah, kaasoo halis ku ah dunida kana sii qartarsan noocyada Karoonaha ee horay loo soo arkay, waxaana hay’adda u bixisay Omicron.
Nooca cusub ee xanuunka ee COVID-19 ayaa si xowli ah ugu faafaya qaaradda Yurub, maalmo kadib markii saynisyahanno u dhashay waddanka South Africa ay halistiisa soo bandhigeen, wuxuuna walaac ku abuuray dowlado badan oo dunida ah.
Boqortooyada Ingiriiska ayaa Sabtidii adkeysay shuruucda kahortagga xanuunkan, iyada oo tijaabo caafimaad ka qaadi doonta dadka soogalaya xudduudaheeda, kaddib markii UK laga helay laba kiis.
Hay’adda WHO ayaa sheegtay in jiritaan xanuunkan markii ugu horreysay laga soo sheegay Koonfur Afrika 24-kii Nofembar, ee sanadkan, sidokale dalalka Botswana, Belgium iyo Hong Kong ayaa la sheegayaa jiritaanka kiisaska xanuunkan.
Wadamo dhowr ah ayaa hadda go’aansaday in ay mamnuucaan ama xaddidaan socdaalka iyo dadka imaanaya dhamaanba waddamada laga sheegay xanuunkan cusub.
Gudaha Mareykanka, Dr. Anthony Fauci, oo ah khabiirka cudurada faafa ee ugu sareeya dowladda, ayaa sheegay inuusan la yaabi doonin haddii nooca cusub ee COVID-19 ee omicron uu horeyba ugu sugnaa Mareykanka.
“Weli ma aynaan arag xanuunkan, laakiin marka uu jiro fayras muujinaya heerkan gudbinta ah, xilli kasta ayuu meel kasta gaari karaa” ayuu Dr. Fauci u sheegay TV-ga NBC.
Waxaa sidoo kale jirta cabi ah in xanuunkan uu awood u yeesho inuu u adkeysto tallaalka COVID-19.
Walaaca laga qabo in mar kale dunidu dib ugu noqoto xayiraadihii kahortagga xanuunkan ayaa isna isi soo taraya.
Ku dhawaad laba sano ayaa laga joogaa markii uu biloowday cudurka faafa ee COVID-19 ee galaafatay nolosha in ka badan 5 milyan oo qof oo ku kala nool daafaha caalamka.
Previous articleQaxooti Soomaali iyo Yemeniyiin isugu jira oo soo gaaray magaalada Boosaaso
Next articleDuqa Boosaaso “Ciidamo badan oo PSF ah ayaa Ku biiray garabka Agasimaha cusub”
Guddiga doorashooyinka oo si cad ugu sheegay awoodda doorashada in ay...
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro oo ka jawaabay dalabkii golaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay in aan loo baahneyn dooda ah in...
Shirka Horumarinta adeegyada caafimaadka oo galay maalintii 2aad
DEG DEG:-Malleeshiyaad isku hor fadhiya xaafad ka tirsan Degmadda Deyniile oo...